Halkan ayaa maanta lagu qaban doonaa kulanka soo dhaweynta reysulwasaaraha Soomaaliya - NorSom News
Halkan ayaa maanta lagu qaban doonaa kulanka soo dhaweynta reysulwasaaraha Soomaaliya
Ururka ardeyda soomaaliyeed ee Norway ayaa Reysulwasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Kheyre ayaa galabta u qaban doono kulan soo dhaweyn ah. Waxaana kulankaas sidoo kale kasoo qeybgali doono wasiirka maaliyada Soomaaliya, Dr cabdiraxmaan Beyle iyo ergeyga dowlada Norway u qaabilsan Soomaaliya.
Kulanku wuxuu noqon doonaa mid u furan soomaalida oo dhan, ayna kasoo qeybgali doonaan dhamaan qeybaha bulshada. Waxaana lagu qaban doonaa hoolka hotellka Thon ee Ullevål Stadion ama adresskan: Sognsveien 77C, 0855 Oslo.
Previous articleReysulwasaare Kheyre oo maanta Oslo kasoo dagay
Next articleXeer cusub oo laxariira garaacidda ubadka